Alatsinainy 07 Septambra 20. – FJKM
Alatsinainy 07 Septambra 20.
2 TANTARA 19.4-11
Voalaza eto hoe : nanendry mpitsara amin’ny sehatra maro samihafa i Josafata mpanjaka mba hampilamina ny fitondrany ny fanjakana tao amin’ny firenena Joda . Tsy vao izy akory no nampisy izany fitsarana ny olona izany mba hanaminana ny fiaraha-monina, fa efa nisy tany aloha tamin’ny andron’i Mosesy nitarika ny Zanak’Israely mihitsy izany (jereo Eks 18). Ny zava-misy anefa dia matetika no lasa mpanao kolikoly ny mpitsara (ampitahao 1 Sam 8.3) . Manoloana izany dia namaritra ny andraikitry ny mpitsara sy ny toetrany i Josafata.
1-Ny andraikitry ny mpitsara
Tendrena ny mpitsara ho amin’ny fandaminana ny fiainana manontolo sy ny fiaraha-monina ka amin’ny zavatra mitranga rehetra eo amin’ny fiainana , toy ny ady samihafa izany , ny momba ny nahafatesana olona , momba ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika samihafa . Mila mananatra sy mampianatra izany izy ireo mba tsy hahatonga ny olona ho meloka eo anatrehan’ Andriamanitra ary mba hampilamina sy hampirindra tsara koa ny fiainana amin’ny ankapobeny mihitsy . Zava-dehibe araka izany ny fitandroan’izy ireo ny anraikitra napetraka taminy mba hizoran’ny fiainana ho araka ny tokony ho izy ho an’ny fiaraha-monina sy eo anatrehan’Andriamanitra.
2-Ny toetran’ny mpitsara
Tsy mety ho vita ho azy anefa izany satria ny mpitsara dia lasa hanana fahefana manoloana ny asa tanterahiny , mety hisy ny fizahan-tavan’olona sy ny fandraisana kolikoly . Eo anatrehan’izany àry dia mampitandrina sy mampianatra sahady i Josafata mba ho feno tahotra an’Andriamanitra izy ireo . Mariho fa asongadina eto ny fananana tahotra an’ Andriamanitra.
Misy eo amin’ny fiaraha-monina ve ny mpitsara tsy matahotra an’ Andriamanitra ?